Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Software Problems » Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem]
1 Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 3rd September 2009, 8:40 am
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 70
သင်တန်းမှာသင်တဲ့အတိုင်း အိမ်ကစက်အစုတ်ကို format တွေချ ပါတေးရှင်းတွေပိုင်း ၀င်းဒိုးပြန်တင်ကြည့်တယ်ဗျာ(လက်ကမြင်းကြောထကြည့်တာ[You must be registered and logged in to see this image.])
driver တွေကို backup မလုပ်ထားမိလိုက်ဘူး မေ့သွားလို့ [You must be registered and logged in to see this image.]
အဲဒါ မားသားဘုတ် ဒရိုင်ဘာ လိုနေလို့
ဘုတ်က msi u480xn ပါ ကူညီကြပါဦး [You must be registered and logged in to see this image.]
အကူအညီချည်းတောင်းရတာ အားတောင်နာလာပြီ [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 3rd September 2009, 8:43 pm
အဲ့ဒါဆိုရင် Black XP တင်ကြည့်ပါလားဗျ.....အဲ့ဒီ့ကောင်မှာ Driver အစုံပါတယ်...
3 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 6th September 2009, 12:38 pm
အကောင်းဆုံးကတော့ window black edition တင်လိုက်ပါ..........ပြီးရင် software သုံးပြီး driver တွေကို backup လုပ်လိုက်ပါ...........နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်မယ်ပြီးမှ.........ကိုတင်ချင်တဲ့ window ပြန်တင်လိုက်ပေါ့
4 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 10th September 2009, 9:43 pm
ကို 3iton3 ရေ [You must be registered and logged in to see this link.] ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ............အဲဒီမှာDriver တွေတော်တော်လေးကို စုံပါတယ်..............Free လဲ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
5 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 11th September 2009, 4:06 pm
ကမ်းနားလမ်းမှာ MSI show room ရှိတယ်ဗျ. အဲဒီမှာ တစ်ခွေကို 500 နဲ့ရောင်းတယ်။ အဲဒီမှာသွားဝယ်လိုက်ပါလား။
6 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 7th December 2009, 12:29 pm
ဘီလူး wrote: အကောင်းဆုံးကတော့ window black edition တင်လိုက်ပါ..........ပြီးရင် software သုံးပြီး driver တွေကို backup လုပ်လိုက်ပါ...........နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်မယ်ပြီးမှ.........ကိုတင်ချင်တဲ့ window ပြန်တင်လိုက်ပေါ့
black XP, chinese ghost, Win7 တွေမှာ driver ကို ဘယ်လိုသိလဲမသိဘူး။ အံ့သြတယ်ဗျာ။ နောက်ပီးတော့ ကျွန်တော့ကြားဖူးတာက အဲကောင်တွေက Driver ကို
chip ထဲကလှမ်းဖတ်ပီးတင်ပေးတာတဲ့။ ဟုတ်မလားမသိဘူး။ သိတဲ့သူများထပ်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး။ driver backup အတွက် ဘယ်ဆော့ဝဲလ်ကောင်းမလဲမသိဘူးနော်။
Sony VAIO NGN-N17G Laptop Driver ပျောက်သွားတာ တိုင်ပတ်နေလို့ပါဗျာ။
7 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 21st January 2010, 8:43 am
National CD Shoop မှာ VAIO Driver Selection အခွေရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်။
8 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 26th February 2010, 6:18 am
Driver Genius ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ လိုအပ်တဲ့ Driver တွေအကုန်လုံးကို ဆွဲယူထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
9 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem] on 26th February 2010, 9:33 am
msi website မှာ ကြိုက်တဲ့ model ကို download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
:doit :doit :doit :doit :doit
10 Re: Motherboard Driver လေးလိုနေလို့ ဟီးးးးး [Problem]